Ubuntu Budgie kutsvaga yepamutemo logo uye Wallpaper | Linux Vakapindwa muropa
Isu takaziva kwenguva yakareba kuti Ubuntu Budgie iri yepamutemo nyowani inonaka. Uye kubvira ipapo zvinoita sekunge timu yese nenzanga vatendeukira mukugadzira vhezheni inorarama zvinoenderana nehunhu hwepamutemo hweUbuntu.
Kunyangwe iyo yekutanga alfa yakasiyiwa, vagadziri vachiri kushanda paUbuntu 17.04 uye iyo Ubuntu Budgie timu haina kudaro. Kufanana nemamwe mavhenekeri, iyo Nharaunda yakagadzira yakatenderedza iyo nyowani nyowani kuravira iwe urikutsvaga iyo yepamutemo logo uye Wallpaper, zvinhu izvo zvese kugovera zvine.
Maitiro acho haasi nyore sezvo ivo vachida kuve neCommunity yese, uye ivo zvakare vari kunonoka kuvhura vhoti sezvo pakanga pasina mugadziri wemifananidzo aigona kugadzira sampuro. Mushure mekuiwana, vashandisi ikozvino vawana iwo masampuli ekusarudza iyo yepamutemo logo pamwe neyekutanga Ubuntu Budgie Wallpaper seyakajeka kuravira.
Ubuntu Budgie 17.04 ichaburitsa Budgie vhezheni pamwe neiyo nyowani logo uye yepamutemo Wallpaper
Uye kana zvese zvikaenda sekuronga, anotevera Ndira 26 tichava neyakagadziriswa budiriro vhezheni yeiyi nhuwirira nyowani, vhezheni iyo yatichakwanisa kuona logo nyowani pamwe neiyo Wallpaper, kana zvirinani izvo zvinotarisirwa.
Kunyangwe pachezvangu ini ndichifunga kuti chinokatyamadza kana kudiwa nevashandisi vese chichava chekuona kuti chii chitsva chaBudgie desktop chichaunza pamwe nekunaka kuri pamutemo. Mazuva mashoma mushure mekunaka kwaitwa pamutemo, ivo Budgie Desktop vanogadzira vaiti vari kusangana nevatambi vekunaka kuti vaise zvese zvitsva zve desktop kune iyo Ubuntu Budgie shanduro. Izvi zvinoreva kuti Ubuntu Budgie 17.04 ichave neiyo nyowani vhezheni yeBudgie Desktop, chimwe chinhu chakamirirwa nevashandisi vema desktop vakawanda uye chatisina kana chinhu mukongiri.
Kana iwe uchida kutora chikamu mukuvhota, in Iyi link Iwe uchawana mavhoti pane iyo Google Plus nhoroondo yeMunharaunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ubuntu Budgie kutsvaga yepamutemo logo uye Wallpaper